Sun, Jun 24, 2018 | 13:20:48 NST
काठमाडौं, चैत १८ – क्रिम दलेर उजिल्लाइएको अनुहारमा झोला बोकेका महावीर केही सिक्दै जस्तो देखिनुहुन्छ । अनि अर्को तस्बिरमा चाहिं मेकअप आर्टिष्टले अनुहारमा क्रिम ‘लिपपोत’ गरिरहनुभएको छ । जीवनमा मोजमस्ती नक्कलझक्कल अर्थात रंगीन कुरामा खासै ध्यान नदिने महावीर पुनले यसपटक चार दिन अनुहारमा क्रिमपाउडर घस्नुपर्यो । ‘रमाइलै भयो’ सुटिङ कस्तो हुँदो रहेछ दाई ? भन्ने प्रश्नमा पुनले भन्नुभयो, ‘तर एकदमै लामो । पहिलोका लागि दुई दिन अनि दोश्रोका लागि एक दिन र आधा लाग्यो ।’
पहिलो भनेको चाउचाउ र दोश्रो भनेको सिमेन्टको विज्ञापनको कुरो हो यो जसमा महावीर पुनले अभिनय गर्नुभएको छ । कुन ब्राण्ड ? ‘यो अहिल्यै नलेखौ, विज्ञापन आएपछि सबैलाई थाहा भइहाल्छ नि ।’ अनि पारिश्रमिक चाहिँ कति लिनुभयो नि ? थप प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘पैसा पनि यत्ति नै भनेको छैन । मैले सबै पैसा एनआइसी कै खातामा हाल्दिनु भनेको छु ।’
नेपालको कुनै बैकसँग नाम मिल्ने भएपनि यो एनआइसी भनेको राष्ट्रिंय आविष्कार केन्द्र हो । कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर केन्द्र चलाउने अभियानका लागि महावीरको नेतृत्वमा अहिले पैसा संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । जसलाई ‘महादान’ भनिएको छ । केन्द्रमा रकम जुटाउन महावीर अहिले कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ । महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि सुरु गरेको नगद दान अभियानबाट दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । दान आउने क्रम चलिरहेको र अहिलेसम्म दुई करोड २० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रकम संकलन भैसकेको पुनले जानकारी दिनुभयो । मध्यम वर्गका नागरिकको सहयोग बढी पाएको र अझै विदेशमा रहेका ब्यक्तिले सहयोग धेरै गरेको उहाँको अनुभव छ । केन्द्रका लागि कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने अभियानमा जुटेका पुनले यो अभियानलाई अझै विस्तार गर्न विभिन्न तरिका अपनाइराखिएको जानकारी दिनुभयो ।
ठूला दातालाई दान गर्न आग्रह
आफूले सुरु गरेको ‘महादान’मा रकम संकलन भइरहेपनि अलि ठूला दानकर्तालाई कन्भिन्स गराउन सके कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ जुटाउन सजिलो हुनेछ । ‘पाँचसय वटा जति पत्र तयार पारेर पठाउन थालेका छांै’ केन्द्रका अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो, ‘सकारात्मक रेस्पोन्स पाएका छौं ।’
‘कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने भन्ने कुरा सजिलो होइन’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर अप्ठ्यारो पनि होइन भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेकै छौं ।’
म्यागासेसे लगायत पदक लिलामीमा
केन्द्रका लागि रकम जुटाउन महावीरले एसियाको नोबेल भनेर चिनिने रोमन म्यागासेसे पुरस्कार लगायतका पदक र सम्मान पनि लिलामीमा राख्नुभएको छ । म्यागागासेसेसहित नेपाल सरकारले प्रदान गरेको राष्ट्रदिप पदकसहित इन्टरनेट हल अफ फेम, डाक्टर हर्क गुरुङ पर्वतीय पुरस्कारलगायत पदक लिलाम बढाबढबाट बिक्रि गर्ने घोषणा महावीरले गरिसक्नुभएको छ । यति नै भन्ने उल्लेख नगरिए पनि लिलामीमा चित्त बुझ्दो रकम दिनेलाई पदक दिने तयारी छ । अहिलेसम्म केहीले मात्र यसबारे चासो राखेर इमेल पठाएका र ती इमेलमा कतिसम्ममा पदक दिने भन्ने सोधिएको पुनले बताउनुभयो ।
पोखरामा आफूसमेत २ जनाको नाममा रहेको २८ रोपनी जग्गा महावीरले यसअघि नै केन्द्रलाई दान गर्नुभएको छ । अहिलेको मूल्यमा ३ करोड रुपैयाँ जति पर्ने जग्गा सकेसम्म नबेच्ने र अरु श्रोतबाटै रकम जुटाउने र त्यो जग्गामै आविष्कार केन्द्र खोल्ने तर दानबाट संकलन नभए त्यहि जग्गा पनि बेच्ने योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको सरकारले महादान अभियानमा ५ करोड रुपैयाँ दिने भनेपनि महावीरले त्यसलाई आस्विकार गरेर नागरिकबाटै रकम संकलन गर्ने बताउनुभएको छ ।
अहिलेसम्म सवा २ करोड उठ्यो
महादानबाट अहिलेसम्म २ करोड २० लाख रुपैयाँ जति रकम संकलन भइसकेको छ । कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भयो भने त्यो पैसाबाट एउटा हाइड्रोपावर कम्पनी चलाउने र त्यसको नाफाले आविष्कार केन्द्र चलाउने महावीरको योजना छ । निकै महत्वकांक्षी लागेपनि यो योजना असम्भव नभएको महावीरको बुझाई छ । म्याग्दीबाट वायरलेस प्रविधिको इन्टरनेट सेवा सुरु गर्दा पनि धेरैले पत्याएकै थिएनन् । तर सोचेभन्दा धेरै नै गुणा त्यो सफल भएको र आविष्कार केन्द्रपनि सफल बनाइछोड्ने उहाँले अठोट ब्यक्त गर्नुभयो ।
आगामी दिनका कार्यक्रमहरु
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको गत शुक्रबार बसेको बोर्ड मिटिङको निर्णय अनुसार यसले सुरु गर्न गइ रहेको प्रारम्भिक चरणका कामहरु यस प्रकार छन्। यसको लागी अहिले सम्म संकलन भएको महादानको १० प्रतिशत सम्म रकम खर्च गर्ने।
१. दुर्गम गाउँहरुमा सबै भन्दा नजिकको अस्पताल अथवा औषधी पसल बाट गाउँका क्लिनिक अथवा स्वास्थ्य चौकीहरुमा अति आबश्यक औषधीका साना साना प्याकेट हरु पुर्याउन मचयलभ प्रबिधिको बिकास गर्ने काम लाई उच्च प्राथमिकता दिने र यो काम गर्नको लागी तत्कालै एउटा टेक्निकल टीमको गठन गर्ने र काम अगाढी बढाउने। यो पूर्ण रुपमा मानबिय सेवाको लागी गरिने काम हो। यो काम गर्न सकियो भने दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरु लाई निकै राहत पुग्नेछ। यस्ता ड्रोनहरु नेपाल मा नै बनाउन सकिने काम हो।
२. बिजुलीबाट चल्ने दुइ पांग्रे, तीन पांग्रे, चार पांग्रे गाडीहरुको प्रविधिको बिकासमा काम गरिरहेका हाम्रा प्रतिभाशाली ब्यक्तीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र सके सम्मको सहयोग गर्ने। बिद्युत बाट चल्ने बाहनहरुको विकास र उत्पादन नेपालीहरुको आबश्यकता अनुसार नेपाल मै गर्न सकियो भने पेट्रोल र डिजेलको आयत कम गर्न धेरै मदत पुग्नेछ। यसरी पेट्रोल र डिजेलमा भएको हाम्रो परनिर्भरता पनि केहि हद सम्म कम हुनेछ। यो काम नेपाल मै गर्न सकिने काम हो।
३. हाल बिद्यालय स्तरमा पढिरहेका तर प्रविधि बिकासको क्षेत्रमा असाधारण प्रतिभा देखाउने काम गरि रहेका नव प्रतिभाहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता अनुसार सके सम्मको सहयोग गर्ने। यसो गर्नुको मुख्य उद्येश्य नेपालमा धेरै भन्दा धेरै प्रतिभाहरु जन्माउनु हो।
४. यी माथी भनिएका कामहरु बाहेक अन्य बिभिन्न क्षेत्रहरु बाट पनि नयाँ र सृजनशील प्रस्ताबहरु आह्वान गर्ने र प्रस्ताबहरु संकलन गरेर छानबिन गर्ने। अनि राम्रो प्रस्ताबलाई आबश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने। हामीले कुनै पनि क्षेत्रको प्रतिभाशाली ब्यक्तीहरुलाई सके सम्म को सहयोग गर्ने छौं र विज्ञानको क्षेत्र लाइ मात्र हेर्ने छैनौं।